RNH 344, June 2, 2018 Soora Qalbii - NuuralHudaa
RNH 344, June 2, 2018 Soora Qalbii
Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa 344ffa
Qophiileen sagantaa kana keeysatti isinii dhiheeysinu,
Qophii Siiraa Rasuulaa (SAW) Darsii 3ffaa Kutaa 26ffaa
Draamaa Iccitii Jireenyaa Kutaa 16ffaa
Gabaasa Odeeffannoo Torbanii
Qopheessaan: Abbaas Ibnal Islaam
Labsiin Yeroo Muddamaa akka ka’u murteeffamuu,
Bulchiinsi Magaalaa Sabbataa Masjiida Seeraan Galmaaye Diiguuf Akeekkachiisa Baasuu,
Ameerikaan Wixinee seeraa ittisa falasxiinotaatiif mana marii nageenyaatiif dhihaate kuffisuu
Donaald Traamp marii hoogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin karoorfate irratti kan hirmaatu tahuu beeksisuu.
Odeeyfannoo guutuu sagantaa Soora Qalbii irraa dhageeyfadhaa.
Qophii Siiraa Rasuulaa (SAW) Kutaa 3ffaa Darsii 26ffaa
Qopheessaan: Ustaaz Abu Abdallaah
Qopheessaan: Abdulnaasir Tufaa
Qophii: Muhammad Siraajii fi Farhiyaa Aadam
Riqicha Daawwitii irraa hojjatame. waahee riqicha kanaa dubbisuuf link kana tuqi.
Kunuunsa Dubartii ulfaa Kooriyaa Kibbaatiif godhamu,
dubartootni ulfaa gargaarsa ajaa’ibaa mootummaarraa argatu. mootummaan Kooriyaa kibbaa dubartoota ulfaatiif Kreedit kaardii doolaara 500 qabu akka badhaasaatti kenna. Akkuma beekamu dubartiin takka eega ulfooytee booda, baasii hedduutu isii barbaachisa. Baasiiwwan isii barbaachisu kanaaf akka hin rakkanneef, mootummaa irraa gargaarsi kun godhamaaf.
Dabalataan dubartoonni ulfaa baasii (Bus) ummataa fi baabura geejjibaa akka fayyadamaniif haalli addaa isaaniif mijaawee jira. Awutobisaafi Baabura geejjibaa hunda keessatti, teessoo halluu Piinkii qabutu kophatti qophaaya. Teessoo halluu Pink qabu kana dubartii ulfaa malee namni tokkollee itti hin dhihaatu.
Fooqii gurguddaa fi iddoowwan daldalaa heddu fuuldurattis, Paarkiingiin ykn bakki makiinaa dhaaban dubartoota ulfaatiif kophatti qophaahee halluu piinkii dibamee jira. Makiinaa dubartii ulfaa malee, makiinaan biro tokkollee bakka kana dhaabbachuu hin dandahu. Iddoo paarkiinii isaaniif qophaahe kana, gaafa ulfaayan irraa kaasee hanga daa’imni isaanii baatii 6 guututti fayyadamuu mirga qabu. Sababaa kanaaf kooriyaa kibbaa keessatti dubartiin ulfaatiifi dubartiin daa’ima baatii 6 gadii qabdu, iddoo paarkiingii dhabdee hin rakkattu jechu. odeeyfanoo guutuu sagantaa soora qalbii irraa dhageeyfadhu.
Qopheessaan: Abduljawaad Ibraahiim
Sagantaa Guutuu Dhageeyfadhu.
Listen to RNH 344 June 2 2018, Soora Qalbii byNHStudio on hearthis.at
Download Sagalee Qulqullina Qabu HD Download Liink Xiqqaa Mobile Biyyaatiif Youtube